News 18 Nepal || व्यवसायीले ५ प्रतिशत ब्याज मै ऋण पाउने बाटो खुल्यो, कस्ले पाउँछन् ?
काठमाडौं । कोभिड-१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पयर्टन व्यवसायीले ५ प्रतिशत ब्याज मै कर्जा पाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय संचालन निरन्तरतको लागि सरकारले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित कार्यविधि अनुसार उद्यम व्यवसाय (घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवम् व्यवसाय) ले २ वर्षसम्मका लागि ५ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाउने छन् । यस्तो ऋण रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्गीकरण गरेका अतिप्रभावितले १० करोड रुपैयाँसम्म, मध्यम प्रभावितले ७ करोडसम्म र न्यूनप्रभावितले ५ करोड रुपैयाँसम्म पाउने छन् ।
कस्ता व्यवसायीले पाउँछन् ऋण ?
सरकारले हालै स्वीकृत गरेको कार्यविधि अनुसार सस्तो व्याजदरको कर्जा लिनको लागि योग्य हुने उद्यम व्यवसाय यस्ता छन्ः
व्यवसाय कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको हुनुपर्छ । नेपाल सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको हुनुपर्छ । श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम पाँच जना भएको हुनुपर्छ । श्रमिक तथा कर्मचारी संख्या भन्नाले स्थायी, अस्थायी, करार, दैनिक ज्यालादारी तथा आउटसोर्सिङ्ग गरिएका समेतको संख्यालाई मान्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानून बमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेको हुनुपर्छ । व्यवसायीले कर्जा प्राप्त गर्न पेश गरेको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको वित्तीय विवरणसँग भिडान भएको तथा करचुक्ता प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्छ ।
तर, प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गर्नु नपर्ने साना ब्यवसायीहरुको हकमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको आय विवरण तथा करचुक्ता प्रमाणपत्र लिएको हुनु पर्नेछ । श्रमिक वा कर्मचारीको तलब बैङ्क खातामा जम्मा गरी भुक्तानी दिने गरेको हुनुपर्छ ।
हेर्नुस प्रभावित क्षेत्रको सुचि;